Iikhabhathi zaseConewago (Ikhabhinethi #3)
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguChris
Bonke bamkelekile kwigumbi lethu lokulala eli-1 elipholileyo kunye neKhabhinethi ephezulu #3 ecaleni kweConewago Creek. Uxolo kwaye uphumle, kwaye umlambo linyathelo nje elikude kwaye ulungile ukutshiza ehlotyeni ukuze uphole.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neWasha kunye nesomisi. Indawo yokupaka iCarport. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile. Zonke izilwanyana zasekhaya kufuneka zibhengezwe phambi kokuba zingene kwaye zivumelane nomrhumo we-$20 wesilwanyana sasekhaya.
-Keurig kunye neepods zekofu zinikezelwe
-AKUKHO ntambo okanye inkonzo yesathelayithi yeTV, zizikhululo ezimbalwa kuphela ezingena nge-eriyali kunye namanye amajelo e-intanethi.
-Kukho i-propane grill kwiveranda.
-Sibonelela ngeenkuni ixesha elide njengoko kukho unikezelo lwethu lwexesha lonyaka.
4.96 ·Izimvo eziyi-347
4.96 · Izimvo eziyi-347
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi347
Lonke uxinzelelo lwakho luya kunyibilika njengoko uphumla kwisitulo somoya ngaphandle kwiveranda ejonge umlambo. Okanye intloko ukuya kwindawo yepikiniki ukuze uphumle kwi-hammock phantsi kwemithi.
Siza kukuvumela ukuba wonwabele ixesha lakho apha kodwa ziyafumaneka ukuze uncede - vele ufowunele/uthumele umyalezo nangaliphi na ixesha.